नेपाल सहित कुन कुन देशमा भेटियो कोरोना भाइरस? हालसम्म ८२ जनाको ज्यान गयो । - Global Sansar
Home/आर्थिक समाचार/नेपाल सहित कुन कुन देशमा भेटियो कोरोना भाइरस? हालसम्म ८२ जनाको ज्यान गयो ।
कोरोना भाइरसका कारण १०६ जनाको मृ'त्यु भएको छ ।
काठमाण्डौ । कोरोना भाइरसका कारण १०६ जनाको मृ’त्यु भएको चिनियाँ अधिकारीहरुले बताएका छन्। याे भाइरसबाट ४ हजार भन्दा बढी मानिस सङ्क्रमित भएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण हुवेईमा सबैभन्दा धेरैको ज्या’न गएको छ। बीबीसीको अनुसार हुवेईमा कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ५६ बाट बढेर ७६ पुगेको छ। त्यस्तै, चीनका अन्य भागका ६ जनाको पनि कोरोनाका कारण ज्या’न गएको पुष्टि भएको छ।
चिनियाँ सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार राजधानी बेइजिङमा कोरोनाका कारण पहिलोपटक एक व्यक्तिको ज्यान गएको छ। ५० वर्षीय एक व्यक्तिको राजधानी बेइजिङमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्या’न गएको हो। चिनियाँ नयाँ वर्षको अवसरमा सार्वजनिक बिदा थपेर आइतबारसम्मका लागि दिइएको छ। वुहानलगायतका सहरमा सार्वजनिक यातायात बन्द गरिएको छ। अन्य राज्य र सहरहरूमा पनि सावधानी अपनाइएको छ। प्रकोप न्यूनीकरणका निम्ति प्रयास जारी रहे पनि संक्रमतिसँगै मृतकको संख्या बढ्दै गएपछि चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।
चीनबाहिरका अन्य राष्ट्रमा पनि कारोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। बीबीसीका अनुसार, जर्मनी, अमेरिका र अष्ट्रेलियामा ४४ बिरामी भेटिएका छन्। त्यस्तै, थाइल्यान्डमा ८, ताइवान, मलेसिया र दक्षिण कोरियामा ४, फ्रान्स र जापानमा ३, भियतनाममा २ बिरामी फेला परेका छन्। नेपाल, क्यानडा, कोलम्बिया र श्रीलंकामा पनि कारोना भाइरसका बिरामी भेटिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। बेलायतका ७३ जनामा परीक्षण गरिएकोमा त्यहाँ भने कसैमा पनि संक्रमण नदेखिएको समाचारमा जनाएको छ।
२०७६, २९ फाल्गुन बिहीबार ०५:३६